Atụmatụ & Aghụghọ |
Gịnị ka anyị kwesịrị ime tupu SMT na PCBs n'oge PCB nzukọ usoro?
site ha na 21-02-28
Gịnị ka anyị kwesịrị ime tupu SMT na PCBs n'oge PCB nzukọ usoro? PCBFuture nwere ụlọ ọrụ SMT na-agbakọta, nke nwere ike ịnye ọrụ nzukọ SMT maka obere ngwugwu 0201 ngwugwu. Ọ bụ na-akwado iche iche nhazi ụzọ ndị dị otú ahụ dị ka turnkey PCB nzukọ na PCBA OEM ọrụ. Ugbu a, m ga-achọ ...
Usoro nsogbu nsogbu a na - enwekarị maka BGA na PCB / PCBA
Anyị na-ezute ogbenye BGA soldering na usoro nke PCB nzukọ usoro ruru ka ekwesighi PCB imewe na-arụ ọrụ. Ya mere, PCBFuture ga-eme ka a nchịkọta na iwebata ọtụtụ ọsọ imewe nsogbu ikpe na m nwere olileanya na ọ nwere ike inye bara uru echiche maka PCB emepụta! E nwere tumadi t ...
Standard nke tin bead na PCBA board
Kpụrụ a na-anakwere maka nha nke obere bead na elu osisi PCBA. 1.The dayameta nke tin bọọlụ anaghị gafere 0.13mm. Ọnụ ọgụgụ nke chaplet tin na dayameta nke 0.05mm-0.13mm n'ime oke nke 600mm adịghị karịa 5 (otu akụkụ). 3. Ọnụ ọgụgụ nke kpụrụ akpụ na dayameta ...
The PCB nzukọ mmepụta usoro
PCBA na-ezo aka n'usoro ntinye, ntinye na ntinyekwa PCB. Usoro mmepụta nke PCBA kwesịrị ịgafe usoro usoro iji mezue mmepụta ahụ. Ugbu a, PCBFuture ga-ewebata usoro dị iche iche nke imepụta PCBA. Usoro mmepe PCBA nwere ike kewaa ...
Ọtụtụ ndị ahịa amaghị ka esi ahọrọ mgbe ha na-achọ ụlọ ọrụ PCBA. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbakọ PCB, na n'elu, ha dị ka otu. Yabụ kedu ka anyị ga - esi chọta ụlọ ọrụ PCBA dabara adaba? Ọ dị ezigbo mkpa ịhọrọ ụlọ ọrụ PCBA nwere ikike nrụpụta kwesịrị ekwesị ...
Kedu ihe kpatara ịhọrọ PCBFuture maka mgbakọ PCB Prototype
1. Ike ekwe SMT omumuihe: anyị dị pụrụ isi chọta igwe na otutu ngwa anya nnyocha akụrụngwa, nke nwere ike na-emepụta 4 nde ihe kwa ụbọchị. A na-akwadebe usoro ọ bụla na ndị ọrụ QC ka ọ wee dịrị mma ngwaahịa. DIP mmepụta akara: E nwere igwe ikuku ịgba ọkụ abụọ. ...
Cannye nwere ike inye PCB Assembly ọrụ maka ụlọ ọrụ nchịkwa ụlọ ọrụ
PCBFuture bụ onye na-emepụta PCBA OEM nke na-enye ọrụ PCB ọkachamara, ị nweta ihe, PCBA na-akwụsị ngwa ngwa na ọrụ ndị ọzọ dị elu na ndị ahịa. Ọ nwere ike ịnye ọrụ PCBA OEM maka njikwa njikwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe. PCBA azụmahịa gụnyere uka EMS na OEM proce ...
Ebee ka ị nwere ike ịtụ ihe ngwa ngwa PCBA
PCBFuture bụ PCBA nhazi emeputa na ya PCB osisi factory na SMT mgbawa factory. Ọ nwere ike inye ndị ahịa ahịa PCBA ngwa ngwa. Ugbu a, m ga-ewebata PCBA ngwa ngwa ikike na usoro. Ihe PCBA nwere ike ngosiputa ngwa ngwa: PCBFuture nwere 10 ọkachamara componen ...
PCBFuture bụ ọkachamara PCBA na-emepụta nke nwere ike ịnye ọrụ PCBA OEM dịka imepụta PCB, ị nweta akụrụngwa, ihe mgbawa mgbawa SMT, ntinye nkwụnye DIP, ule mgbakọ, wdg. Ugbu a, ka anyị webata etu ụlọ ọrụ PCBA si ahụ na ihe ndị a zụrụ bụ mbụ? Com ...
Oge nnyefe PCBA nwere njikọ chiri anya na tupu arụmọrụ. Ndị ahịa ahụ kwesịrị ibu ụzọ nye ndị na-esonụ ihe. Enwere ike ịnyefe ngwongwo n'ime ụbọchị 3 mgbe emechara ihe niile. Ọ bụrụ na enwere nhazi DIP, ọ ga-ewe ụbọchị 5-7 iji nyefee. Ọ bụrụ na ịnwe iwu ngwa ngwa nke nwere ike ịbụ ...
Kedu otu ụlọ ọrụ nwere ike isi belata ọnụahịa nzukọ SMT
Ka ọ dị ugbu a, China abụrụla osisi na-emepụta ihe n'ụwa niile. Iguzogide asọmpi ahịa, otu esi emeziwanye ogo ngwaahịa, belata ọnụ ahịa ngwaahịa, melite arụmọrụ, ma belata oge ndu bụ akụkụ bụ isi nke njikwa ụlọ ọrụ na-arụpụta ihe. SMT bụ elu nzukọ technolo ...
Nnukwu mkpa nke nchekwa ESD na ọrụ mgbakọ kọmputa
E nwere ọtụtụ nkenke electronic components na PCB nzukọ mbadamba, na ọtụtụ mmiri na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ voltaji. Ihe ijuanya dị elu karịa volta gosiri na ọ ga-emebi ihe ndị a. Otú ọ dị, PCBA mebiri site na ọkụ eletrik na-esighi ike iji nyochaa nzọụkwụ site na nkwụsị n'oge nnwale ọrụ. ...